‘वैठक नबोलाइए अनशन शुरु गर्छाै’
‘वैठक नबोलाइए अनशन शुरु गर्छाै’ डा. विजय पौडेल
जनतापाटी बुधबार, साउन २८, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । पार्टी भित्रको विवाद समाधानको लागि छलफल गर्न केन्द्रिय कमिटीको वैठक बोलाउनु पर्ने माग गर्दै सत्तारुढ नेकपाका १५२ जना केन्द्रिय सदस्यहरुले साउन १४ गते केन्द्रिय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर केन्द्रिय कमिटीको मात्र होइन, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरोकै वैठक वस्न सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा वैठक आव्हान गर्न माग गर्दै निवेदन दिएकाहरु के गरिरहेका छन् ? भन्ने बारेमा वैठकको माग गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका पोलिट व्युरो सदस्य डा. विजय पौडेल भने बैठक नबोलाइ नेतृत्व विरुद्ध आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रस्तुत छ, पौडेलसंग जनतापाटीले गरेको कुराकानीको सार संक्षेपः
केन्द्रिय कमिटीको वैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो, त्यसबारेमा अहिले के भैरहेको छ ?
हामीले निवेदन दर्ता गरायौं र पार्टीका एकजना अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड तथा दुवै जना वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि भेटेर आफ्नो कुरा राख्यौं । तर, अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भेट्ने समय पाएका छैनौं । हामीले भेटनको लागि निकै प्रयास गर्यौं । तर, समय पाइरहेका छैनौं ।
त्यसको अर्थ तपाईहरुले पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराउनु भएको निवेदनको औचित्य सकियो होइन ?
त्यस्तो होइन । हामीले पार्टी कार्यालयमा अध्यक्षलाई नै सम्वोधन गरेर निवेदन दर्ता गराएपछि अध्यक्षले चिठी नपाउने भन्ने कुरा हुंदैन । चिठी पाएपछि हामीलाई भेट्नको लागि खबर आउंछ भन्ने थियो । तर, एकजना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री कमरेडबाट अहिलेसम्म पनि कुनै खबर आएको छैन । न त वैठक बोलाएको सूचना नै आएको छ । हामीले निवेदन दिएको एक महिना वैठक बोलाइन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । वैठक बोलाइएन भने हामीले दवावका कार्यक्रमहरु शुरु गर्छाैं ।
केन्द्रिय कमिटीको वैठक बोलाइन्छ भन्ने अझै आश गर्नु भएको छ ?
हामीलाई त्यो विश्वांस छ । केन्द्रिय कमिटीको वैठकबाटै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । यो कुरा बुझेर नेताहरुले वैठक बोलाउनुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।
कोरोना महामारीले उग्र रुप लिएको बेला वैठक बोलाउने संभव छ र ? त्यो अर्काे घातक कदम हुंदैन ?
नेतृत्वले चाहाने हो भने वैठकै वस्न नसक्ने कुरा होइन । सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डहरु अपनाएर वैठक वस्न सकिन्छ । प्रत्यक्षरुपमा वैठक वस्न नसके भर्चुअलरुपमा पनि वैठक वस्न सकिन्छ । मुख्य कुरा नेतृत्व गंभिर हुनु पर्यो । पार्टी वैठकबाटै समस्या समाधान गर्छाैं भनेृर प्रतिवद्ध हुनु पर्यो । वैठक कसरी बस्ने भन्ने त एउटा विधि तयार गर्न सकिन्छ । त्यो ठूलो कुरा होइन ।
तपाईहरुको माग वमोजिम वैठक वसेन भने के गर्नुहुन्छ ?
हामीले एक महिनासम्म हेर्छाैं । त्यो बीचमा पनि वैठक बोलाइएन भने हामी आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्छौं । पार्टी कार्यालयमा धर्ना अनसन शुरु गर्छाैं । नेताहरुलाई दवाव दिनको लागि हरसंभव प्रयास गर्छाैं ।
तपाईहरुको दवावले पार्टी विभाजन रोकिएला ?
हामीलाई विश्वांस छ, पार्टी विभाजन हुंदैन । देशभरिका नेता कार्यकर्ताहरु विभाजनको विपक्षमा छन् । जस्ले विभाजन गर्छ, त्यो सकिन्छ । त्यसैले पार्टी विभाजन त्यति सजिलो र कसैको लहडमा हुने काम होइन ।
वेब सिरिजको बढ्दो क्रेज, नेपाल किन भयाे कमजाेर ? १३ मिनेट पहिले
कोसीमा हाम फालेका दाहाल बेपत्ता ३३ मिनेट पहिले
राप्रपाका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष माओवादी केन्द्रमा ३६ मिनेट पहिले